सायद मात्र हाम्रो देशमा, मासु पोर्क भन्दा कम लोकप्रिय छ, र मासु तयार गर्न कठिन र गाह्रो मानिन्छ। यस्तो निष्कर्ष बस, भोजन को सूची पढेर अन्य देशहरूमा बीफ तयार, र हाम्रो scanty सूची संग तुलना गरेर, पुग्न सजिलो छ। यो कम्तिमा पनि रोस्ट बीफ कसरी खाना पकाउनु सिक्न समय। यो के हो? रोस्ट मासु, मनपर्ने अंग्रेजी पकवान, एक हार्ड र धेरै appetizing।
रहस्य र subtleties
शायद कुनै पहिले नै यो पकवान पकाउन गर्ने प्रयास भएको छ, तर रनभुल्लमा भयो, शङ्का हराएको: छैन रोस्ट बीफ प्राप्त किन? के यो अन्त मा छ - छैन नै सही सबै गर्छन, र परिणाम हो। तर वास्तवमा बीफ सम्हाल्नुभएको पर्छ भनेर। को लास तीन हप्तासम्म "otvisetsya" बाँकी छ। यो समय मा गर्न छैन हराएको छ, विशेष अवस्था आवश्यक: धेरै सुक्खा ठाउँमा जहाँ चार भन्दा कुनै उच्च तापमान, तर कहिल्यै कम दुई भन्दा डिग्री - र उत्कृष्ट वेंटिलेशन। यी मापदण्डहरू संग, मासु पछि काटेर छ जो एक विशेष को सतह, एक पाप्रो खेल्छ। तर यो एक नाजुक अद्वितीय स्वाद र खास स्वाद संग softest बीफ छ मुनि। र, को पाठ्यक्रम, एक रोस्ट बीफ tenderloin वा उपयुक्त मात्र बोसो र कम बोसो boneless किनारा। र मासु धेरै ताजा लिएको हुनुपर्छ, र सुन्दर यो खाना पकाउने अघि - तर चिसो छैन!
क्लासिक अंग्रेजी नुस्खा
तपाईं घरमा यो पकवान बनाउन चाहनुहुन्छ र बेलायतमा बस्न छैन भने, तपाईंले कसरी साधारण, पनि एक उच्च अन्तमा, असम्भव बाहिर रोस्ट बीफ खाना पकाउनु मासु तयार गर्न सक्छ, त्यसैले। बाफ काटन ले, उनको खाना चर्मपत्र मा र्याप र एक हप्ता कम्तीमा फ्रिज तल मा लुकाउने (जो सामान्यतया तरकारी भण्डारण गर्दछ)। स्ट्रिङ संग कस बाँध - यो समयमा, यो धेरै पाप्रो, कट गर्नुपर्ने र मासु को एक रसदार टुक्रा गठन। त्यसपछि, सम्पूर्ण सतह तेल, राम्रो तेल संग लेपित र मरिच rubbed छ। कालो अनिवार्य छ; तपाईं थप्न सक्नुहुन्छ र रातो, तर तपाईं फरक को एक मिश्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मामला मा नुन हुन सक्दैन - ड्राई। सबै पक्ष बाट बन्डल तला एक ठूलो कराइ - धेरै चाँडै शरमाना देखियो, तर मासु सुक्खा थियो। एक preheated ओवन ग्रिल मा अन्तर्गत हुन्छ - पैन, र यो मा - बीफ। पहिलो 20 मिनेट, तापमान त यो 150 मा घट्छ, र पाक रूपमा आवश्यक रहन्छ, 250 डिग्री मा कायम हुनुपर्छ। रोस्ट निरन्तर रस को एक टुक्रा मा तल बगिरहेको पानी हाले हुनुपर्छ।
जडिबुटी घिउ संग तला रोस्ट बीफ
रोस्ट बीफ पकवान एक साधारण सिद्धान्त आधारित विभिन्न संस्करण छ। यस नुस्खा तल प्रस्तावित ओवन मा तत्परता गर्न ल्याउन आवश्यक छैन। लिएको को4ठूलो टुक्रा मासु tenderloin, धोए र obsushivayut। न त हरायो, न त मोल्ड तरिका मासु आवश्यक छैन - केवल एक अपेक्षाकृत समतल स्लाइस चयन गर्नुहोस्। प्रति पक्ष एक मिनेट - तेल प्रत्येक टुक्रा उच्च गर्मी दुवै पक्षले तला छ। त्यसपछि मासु अड्डा नुनीन र त्यसपछि frying जारी, तर शान्त स्पार्क मा रोस्ट तयार नभएसम्म। एक साथ "हाइलाइट" तयार: मक्खन को 100 ग्राम homogeneous सम्म कटा साग, लसुन र डिल संग kneaded, चम्मच कागति को रस खन्याइन् र नुन र मरिच खन्याउन। जब सबै घटक ठूलो ससेज रोल, पन्नी मा र्याप देखि परस्पर भिगो थिए र फ्रिज पठाइएको छ। मासु प्रत्येक स्लाइस लागू गर्दा जडिबुटी घिउ टुक्रा राखे। रसदार र स्वादिष्ट!
रेड वाइन सस संग रोस्ट बीफ
पहिलो, तरकारी तकिया तयार: ठूलो दुई रातो प्याज, दुई अजवाइन बालाको र एक ठूलो गाजर कटौती। तरकारी समान रूप पाना duhovochnomu वितरण र तेल संग moistened। सस "Vorchster" र दुई ठूलो चम्मच Dijon तोरी मिश्रित र priperchivayutsya। यो मिश्रण यो तरकारी भन्दा फैलाउन छ जो पछि बीफ tenderloin को6स्लाइस, rubbed। सारा संरचना आधा एक घण्टा (तापमान 180) को लागि एक ओवन मा राखिएको छ। पाकेका रोस्ट एक कचौरा मा स्थानान्तरित र न्यानो राख्न पन्नी संग र्याप। परिणामस्वरूप रस एक पैन मा गरम छ तरकारी संग मर्ज, यो पिठो को चमचा को एक जोडी हालिएको छ र जगाएर गर्दा सस केही मिनेट उसिनेर छ। त्यसपछि सुक्खा रातो रक्सी को आधा ग्लास पोखे, आगो को frying फिर्ता प्यान तरकारी, स्क्रूड छ, र सात मिनेट चटनी एक सानो अब खाना पकाउन। मा भएको तरकारी को समापन हटाइएका छन्, फिल्टर र बीफ मा सस पोखे।
छाँट्दछ संग मसालेदार रोस्ट बीफ
मासु को आधा किलोग्राम ध्यान मरिच को एक मिश्रण संग rubbed, स्क्वास4लसुन लौंग, तेल र सूक्ष्मता कटा डिल, तुलसी र साग। tenderloin अवश्य घण्टा खटाई मा हालन। त्यो समयमा, दुई घण्टी खुर्सानी स्ट्रिप्स र स्ट्यु कटौती। अन्त बुझाने अघि दस मिनेट तिनीहरूले धर्काहरू छाँट्दछ (फल कप बारेमा) थपियो। पूर्णतया पकाएको सम्म जब बीफ promarinuetsya, यो घिउ मा ब्रेडक्रंब र भुट्नु मा लुढका। सेवा, जो थपियो छाँट्दछ र मरिच अघि; सद्भाव लागि, तपाईं उसिनेर चामल थप्न सक्नुहुन्छ।
रोस्ट बीफ संग सलाद
उदाहरणका लागि, पात र हिमशैल - दुई सलाद को किसिमहरु देखि आउनुहोस्। तिनीहरूले मध्यम आकारको कटा, मिश्रित ककडी स्ट्रिप्स र quartered चेरी टमाटर संग छन्। रोस्ट बीफ रोल सानो रोल तरकारी ढाकिएको र सस असामान्य खन्याउन जुन, स्लाइस मा कटौती गरिएको छ। यो मलाईदार दही, एक चम्चा एक गिलास देखि बनेको छ खूबानी जाम को, सहिजन, मरिच, नुन र कागती रस को grated सानो मूल (तिनीहरूले आफ्नै स्वाद राख्न)। रोस्ट बीफ यस्तो सलाद, सबै भन्दा capricious palates पूरा हुनेछ। तपाईं पनि सहिजन चिप्स संग छिडकना गर्न सक्छन्, तर यो कुक समाधान छ।
मासु को सट्टा पोर्क
हाम्रो अक्षांश लागि आधारभूत प्रश्न हो: "म मेरो मनपर्ने मासु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, रोस्ट बीफ योजना रूपमा" कि यो मात्र "पागल गाई" पकवान, सबै कुरा स्पष्ट गरेको छ, तर केही किनभने बस बीफ रुचि छैन! यो पोर्क प्रशंसक लागि निम्न नुस्खा प्रस्ताव राखे। कट को एक ठूलो टुक्रा, धोए र obsushenny, नुन संग rubbed। यो एक चीरा (छैन पूर्ण) छ, र त्यसपछि उहाँले वरिपरि उत्तेजित गर्दछ र केही बाउन्स बुक। यो तोरी, मरिच (रातो र कालो), सुकेको तुलसी, प्याज र लसुन crumbled को एक मिश्रण छ। सबै घटक "आँखा द्वारा" लिएको छन्। मिश्रण "बुक", रोस्ट पोर्क ligated मुद्दा सम्मिलित छ र ओवन मा चालीस मिनेट मा राखिएको छ। यो समयमा, मासु चिल्लो सुन्दर ढाकिएको छ "घामले डढाउने काम।" पानामा, ओवन बाहिर झिकेर पन्नी ढाकिएको र अर्को चौथाई घण्टा फिर्ता गरिएको छ - juiciness लागि।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि गाह्रो छैन। किन छैन रोस्ट बीफ पकाउन? यो के हो, तपाईं पहिले नै हामी खुसी गरेका व्यञ्जनहरु, तपाईं नयाँ चुचुराहरूको र पाकशाला आश्चर्य आफ्नो प्रियजनलाई अप्रत्याशित प्रतिभा toques संग जित्न गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर थाह छ। आफ्नो परिवार महसुस ब्रिटिश गरौं।
भाँडा दूध: तस्बिर संग व्यञ्जनहरु
तपाईंको हातमा तपाईंको घरको घरमा बर्न निर्माण गर्ने
को laminate को आकार के हो?
Tsahton सस: नुस्खा र सिफारिसहरू